Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Njem nlegharị anya nke Kerala: Hichaa Osimiri Chaliyar ugbu a
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Omume Kerala Paddle
A ga -eme mbipụta nke asaa nke Chaliyar River Paddle na Kerala, India, site na Nọvemba 7 ruo 12, 14, na ozi ga -aga "plastic negative."
Ihe omume ịkwọ ụgbọ mmiri ụbọchị atọ nke Jellyfish Watersports haziri na njem nlegharị anya nke Kerala na-akwalite ahụmịhe ọdọ mmiri nwere gburugburu ebe obibi nke na-ejikọ ndị na-eto eto na ndị toro eto.
Ụgbọ mmiri ahụ dị kilomita 68 ga-amalite site na Nilambur, nke dị na ndagwurugwu ghats Western na Malappuram.
Ọ ga -akwụsị na Beypore na mpaghara Kozhikode, ebe osimiri ahụ na Oké Osimiri Arab na -ezute.
A ga -agbaso usoro nchekwa COVID n'oge ihe omume ahụ yana akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID bụ ihe dị mkpa iji sonye na mmemme ahụ. N'afọ a, nyere ọnọdụ a, a ga -akwalite ihe omume a dị ka ihe omume phoenix iji bulie ọrụ njem na Kerala. Ihe omume a ga -enye njem, maa ụlọikwuu na isi mmalite ahụmịhe ịkwọ ụgbọ mmiri, na -eji kayaks, SUPs, raft, na afọ a n'ụbọchị nke atọ, ndị nhazi na -ewebata ịkwọ ụgbọ mmiri (ndị na -anya ụgbọ mmiri) na ụgbọ mmiri na -eme ka ọ bụrụ ebe sara mbara. a na-eji ụgbọ mmiri na-ejighị igwe eletriki eme ihe-ihe ọhụrụ ị ga-atụ anya na ahụmịhe.
Osimiri Chaliyar Paddle na-enye ohere n'ọkwa dị iche iche site na ndị mbido ruo ndị na-adịghị egwu mmiri ruo ndị nwere mmasị n'egwuregwu mmiri siri ike, ndị hụrụ okike n'anya, ndị njem, ụmụaka na ndị mmadụ sitere n'akụkụ niile nke ndụ. Ihe omume a na-akwalite osimiri Kerala, ịma mma ha, ezigbo nri Malabar, ma na-enye ohere pụrụ iche izute ndị nwere mmasị. Ndị otu egwu mpaghara ga -ejikọ aka ọnụ iji kwalite nka ha ma nye ndị na -akwọ ụgbọ mmiri mgbede. Ụlọ oriri na ọ localụ localụ kacha mma dị ka Calicut Paragon ga -enye nri.
“Osimiri Chaliyar Paddle lekwasịrị anya n'ịchekwa osimiri anyị site na mmetọ obodo mepere emepe na ịkwalite [kaya] ntụrụndụ maka onye ọ bụla. Ọ bụ ihe adịghị mma plastik, yabụ ndị na -akwọ ụgbọ mmiri ga -enyere aka ihicha osimiri mgbe ị na -akwọ ụgbọ mmiri. Anyị esorola otu NGO dị n'ime obodo nke ga -enye ndị sonyere akpa akpa nchịkọta wee buru mkpofu ahụ gaa ebe nrụzigharị na mkpofu ihe mkpofu ha. Ha ga -akụzikwara ndị sonyere na ikewapụ nke ọma, oriri kwesịrị ekwesị, na njikwa ihe mkpofu. Ọ bụ ihe niile gbasara ịnweta Njem nlegharị anya Kerala mpaghara iji gbaghachi azụ na ọrịa COVID yana ịgbasa mmata banyere gburugburu ebe obibi yana oke mmetọ plastik na -asọba na osimiri, "Kaushiq Kodithodika, Onye guzobere Jellyfish Water Sports kwuru.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ, gụnyere ozi ndebanye ihe omume Ebe a.